को कफन के हो र यो कसरी मनाउन
अर्थोडक्स पात्रो मसीहीहरूको लागि एक विशेष महत्वपूर्ण घटना सँग सम्बन्धित छ प्रत्येक जो धेरै बिदा, समावेश छन्। अब, धेरै के आवरण आश्चर्य र कसरी यो राम्रो मनाउन गर्नुपर्छ। यो विन्दुमा विशेष भन्सार। तर अर्थोडक्स पात्रो कुनै पनि अन्य विशेष दिन संग, यो आवश्यक छैन घरेलू घरधन्दा, लुगा धुने, सफाई, सिलाई र यति मा यसलाई पकड छ।
त्यहाँ ढाकिएको छ के भन्छन् भन्ने एक पौराणिक कथा छ। त्यही दिन, 14 अक्टोबर, गिरावट सेना को बीचमा रस Constantinople, Orthodoxy को केन्द्र घेर। त्यसपछि शहर को बासिन्दा मुक्तिको लागि प्रार्थना गरे। र सहयोगका भर्जिन आए सबै नागरिकले यसको आवरण ढाकिएको भएको। यसरी तिनीहरूले रक्तपात उम्कन सक्षम थिए। यसलाई यो हरुवा Voevoda Askold आफ्नो सेना र अर्थोडक्स विश्वास गरे र प्रभु को लागि माछा मार्ने विश्वास सँगै संग त थियो कि विश्वास छ। यो दिन समय को घटना समर्पित गर्ने Theotokos, छुट्टी, को अन्तर्विन्ती मनाइन्छ, यो पौराणिक कथा धन्यवाद छ। तसर्थ, यस दिन रमाइलो र राम्रो मुड छ सल्लाह छन्। यो पनि मन्दिरमा भ्रमण र भर्जिन मरियम को प्रतिमा अघि प्रार्थना गर्न सिफारिस गरिएको छ।
को कफन, यो दिनमा omens र विश्वास के छ
यो एक अविवाहित केटी विवाह को हाम्रो लेडी को प्रतिमा अघि प्रार्थना गर्न भने, यो चाँडै एक जवान betrothed द्वारा भेट हुनेछ भनेर विश्वास छ। , महिला विवाह प्रार्थना, परिवार शान्ति ल्याउनेछ। एक छुट्टी पातलो प्यानकेकहरू Bake र किनाराको र्याप भने, त्यसपछि घर न्यानो सबै जाडो हुनेछ। अन्तर्विन्ती के हो - हावा मौसम को हिउँदमा हुनेछ के निर्धारण गर्न सक्छन् जब एक समय: दक्षिणी को न्यानोपन heralds, उत्तरी - गंभीर frosts। तर त्यो दिन एक विवाह र हिउँ खेल्न भने, यो तिनीहरूलाई आनन्द र समृद्धि लागि प्रतीक्षा नयाँ परिवारको लागि एक धेरै राम्रो साइन छ। पनि यो दिन, तपाईं पुरातन समयका पुराना लुगा को चोकमा जलाइएको थियो लागि, दुष्ट आँखा विरुद्ध रक्षा गर्न सक्छन्। त्यो दिन स्याउ शाखा जल द्वारा, एक व्यक्ति घरमा न्यानोपन प्रदान गर्दछ भन्ने विश्वास गर्न गरे।
प्रत्येक दिनको लागि प्रार्थना तपाईं जान्नु आवश्यक
Anosino-बोरिस र Gleb विहार र यसको इतिहास
अर्थोडक्स रूस: पुनरुत्थानको विहार (Torzhok)
चर्च मा मोमबत्ती कसरी प्रकाश गर्न
विवाह को लागि एक सुन्दर पोशाक कसरी चयन गर्ने?
जाडो मोडमा सञ्झ्याल कसरी अनुवाद गर्न? प्रमुख सिफारिसहरू
Artem को नाम सबै मा प्रतिभाशाली बुझाउँछ कि?
"Maynkraft" रत्तीएको जनावर जस्तै, वा किसान महसुस!
Colonels - ग्रीस मा सैन्य diktitura। को शासकों को विशेषता सुविधाहरू
कसरी मालिक मा हाम फाल्न आफ्नो कुकुर wean गर्न: सुझावहरू
"Levocetirizine": प्रयोगको लागि निर्देशन, दबाइ, analogues र समीक्षा विवरण